Inkonzo yasimahla yeAmazon iya kuyeka ukusebenza | Iindaba zeGajethi
Inkonzo yasimahla yeAmazon yenkonzo iya kuyeka ukusebenza
Kwiminyaka embalwa, iAmazon isinikeze izicelo simahla zokuzikhuphelela simahla xa sitshintshela esweni umsebenzi esiwenzayo kunye neAmazon Underground, ngale ndlela abasebenzisi banokukhuphela usetyenziso oluhlala luhlawulwa kuGoogle Play Store kwaye bonwabele ngaphandle nayiphi na intengiso. Kodwa ngayo Abasebenzisi kufuneka bakhuphele usetyenziso kwiAmazon kwaye bayikhuphele kuyo, enokuba yingxaki kubasebenzisi abaninzi. Kwiminyaka emibini kamva, iAmazon ibhengeze nje ukuba le nkonzo izakuyeka ukusebenza embindini walo nyaka.
Okwangoku asazi ukuba siyakuba yintoni isizathu kwaye ngekhe sazi ukuba inkampani ayizukuchaza isizathu sokuphela kwale nkonzo. Abasebenzisi bangoku benkonzo engaphantsi komhlaba yeAmazon Baza kuba nakho ukuqhubeka nokukhuphela usetyenziso kude kube ngaphambi kokuvalwa kwenkonzo embindini walo nyaka. Inkampani ayizukuvuma ezinye izicelo ukusukela nge-31 kaMeyi kodwa ayizukuchaphazela bonke abasebenzisi ngokulinganayo kuba abasebenzisi be-Android baya kuba ngabokuqala ukuchaphazeleka ngokurhoxiswa kwale nkonzo.
Nangona kunjalo, abasebenzisi beenkampani zoMlilo izixhobo Baza kuba nakho ukuqhubeka nokusebenzisa inkonzo kude kube ngu-2019, umhla apho izicelo kunye nenkonzo ziya kuyeka ukusebenza. Imfesane kukuba iAmazon ithathe isigqibo sokurhoxisa le nkonzo, evumela abasebenzisi abaninzi ukuba bayisebenzise ukuze bonwabele usetyenziso lwasimahla ngaphandle kokubhenela kubuchwephesha nangaliphi na ixesha. Ukuba awukabinabasebenzisi bale nkonzo kodwa ufuna ukusebenzisa ithuba ngaphambi kokuba bayirhoxise, ungafikelela ngqo ngokusebenzisa ikhonkco elilandelayo. Le nkonzo isebenza ngeakhawunti yeAmazon oyisebenzisayo ukuthenga kwivenkile yeAmazon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Inkonzo yasimahla yeAmazon yenkonzo iya kuyeka ukusebenza
Isamsung isasaze i-55 yezigidi ze-S7 kwihlabathi liphela
Iimephu zikaGoogle zinokunikela ngeentengiso kwiimephu zayo